Ukhuselo loMmandla oMnyama luya kukubeka phambi kwetotshi, isixhobo sakho kunye nobumnyama | I-Androidsis
Ukhuselo loMmandla oMnyama ngumdlalo omtsha we-Android apho kuya kufuneka ukhusele loo ndawo apho kulawula ubumnyama kwaye ukukhanya kwetotshi yakho kuya kukunceda ufumane ezo zilwanyana kunye neziporho eziza kuwe.
Ngenani elifanelekileyo lezixhobo onakho zikhusele kwaba bagxeki bayoyikekayo Oko kuyakukubamba ebumnyameni, ke lungiselela umdlalo apho iadrenaline yakho inyuka ngokuxhuma kwaye ibambe njengoko imizuzwana ikhawuleza. Ingakumbi kweso sandi sibeka uxinzelelo olufanelekileyo.
1 Isibane kunye nobumnyama
2 Iintshaba ezininzi kunye nezixhobo kuKhuseleko loMmandla oMnyama
3 Umdlalo we-freemium awunjalo kangako
Isibane kunye nobumnyama
Yiba nayo isibane kwaye ungene ebumnyameni, ukuze nasiphi na isandi esingaqhelekanga sivelise kuthi inqaku loxinzelelo esikhokelela ekubeni sibe novalo. Ukuba sele siqala ukubona izinto ezingcolileyo zisondela, siya kuthatha into esinayo ukuze sikwazi ukuzikhusela. Kwaye ukuba kuKhuselo loMmandla oMnyama sinamalangatye, umpu kunye nolunye uhlobo lwezixhobo, ubuncinci, siya kuziva sikhuseleke kancinane.
Kwaye yile nto kuthiwa ngumdlalo obizwa ngokuba yindawo yoKhuselo loMmandla oMnyama we-Android, ukuzikhusela ebumnyameni babo Izinto ezoyikisayo eziza kuthi ngezantya ezahlukileyo, eziza kusivumela ukuba senze iidigri ezingama-360 zokujika ukuze sikwazi ukuzidubula ngokokusondela komntu ngamnye. Ngethamsanqa, nangona izilo ezininzi zisinyathela, sinokuba nemizuzwana yokucinga ukuba yeyiphi esiza kuyihlasela.
Ke siya kuba nayo amanqanaba awahlukeneyo ekufuneka siwagqibile ukuya kwelinye elilandelayo kwaye ufumane izakhono ezahlukeneyo, izixhobo kunye namandla. Ukusuka kwizicimi-mlilo ukuya kwimeko yokwandisa umgama wombono wesibane esiza kusivumela ukuba siqhubeke nokuhlala ebusweni babo bantu bakwezinye iindlela.
Iintshaba ezininzi kunye nezixhobo kuKhuseleko loMmandla oMnyama
Eyona nto intle malunga noKhuselo loMmandla oMnyama kukuba sineentlobo ngeentlobo zezixhobo kunye namandla okuvula. Zizonke zizonke ngaphezulu kwezixhobo ezingama-20 nangaphezulu kwezakhono ezingama-50 ezinokuthi zivelise iindlela ezahlukeneyo zokudlala nokujongana nale mikhosi yeziporho, izilo ezinomlomo oxingileyo kunye nabahlaseli bobumnyama abaya kuzama ukutshona amazinyo nangawuphi na umzuzu.
Kukwakho nabaphathi bokugqibela ekufuneka silwe nabo kwaye sijonge izixhobo ezibatshabalalisayo ngaphambi kokufikelela kuthi. Isixhobo esivunyiweyo sisixhobo esincomela ukuba sisisebenzise kwezinye, ngelixa umbane uya kubasusa amaqela iziporho kwimizuzwana eliqela. Inyani yile yokuba ukuzazi kakuhle izixhobo ezahlukileyo esinazo kuya kuthetha ukuba sinako ukuqhubela phambili, ke ulinge ngazo.
Kummandla oMnyama woKhuselo Asijongene nomdlalo oguqulelwe kwiSpanish, kodwa nje yenzekile neyokugqibela esele idlulile kuphononongo lwethu, kuya kuba lula kakhulu ukuyiqhela, kuba yonke into iboniswe ngendlela ebonakalayo ukuze siyiqonde. Ekugqibeleni, apha uza kudubula amarhamncwa amaninzi, ke ii icon ziyakwazi ukwahlula phakathi kompu womatshini kunye nento esarhiweyo.
Umdlalo we-freemium awunjalo kangako
Enye yezona zinto zibalaseleyo zoKhuselo loMmandla oMnyama yile Andiziva ndikhululekile. Oko kukuthi, sinokudlala imidlalo eliqela ngaphandle kokuziva sothuswe yintengiso. Siphantse satsho ukuba asikaze siyibone ikhoyo, ke okwangoku, ukuba ayitshintshi, ukuyonwabela kuyathethwa ngomdlalo oqhelekileyo kunye nolonwabo apho siza kuba nezilo ezahlukeneyo, izixhobo, ubuchule ...
Ngokobuchwephesha intle kwaye iyilo le-monster njengoko iziphumo zezixhobo ezahlukeneyo zinika ubungakanani ukonwaba ngalo lonke ixesha sivula isixhobo esitsha. Isandi sikwacrado kwaye kubalulekile ukuba siqwalasele kwaye siyazi indlela yokwahlulahlula into eyenziwayo ziibugs nganye. Elinye iqhinga, nikela ingqalelo kwizilumkiso ezibonakalayo zerobhothi yethu, kuba ibonisa ukuba loluphi uhlobo lwerhamncwa oluza kuthi.
Ukhuselo loMmandla oMnyama ngumdlalo owonwabisayo nowenziwe kakuhle we-Android onokuyonwabela ngayo iiyure ezininzi. Ukuba uthe wanomlutha, uza kuya kude, kuba inamanqanaba aneleyo kunye nezinto ezahlukeneyo zomxholo ukuze kwenzeke.
Ukhuselo loMmandla oMnyama
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Khusela ummandla kwiziporho nakwizilo kuKhuselo loMmandla oMnyama